Faah faahin:- Ciidanka Jubbaland iyo Al-shabaab oo dagaal culus ku dhex-maray duuleedka Kismaayo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Ciidanka Jubbaland iyo Al-shabaab oo dagaal culus ku dhex-maray duuleedka Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya gobolka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland iyo dagaalyahanadda Al-shabaab uu habeenkii xalay dagaal culus ku dhexmaray inta u dhaxeeysa deegaanka Goobweyn iyo Lugloow ee duuleedka magaalada Kismaayo.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii dagaalyahanadda Al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen askar ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo kasoo baxay deegaanka Goobweyn islamarkaana marayay meel u dhaw deeganka Lugloow ee gobolka J/hoose.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay labo qof oo ka tirsan Al-shabaab, iyadoona seddax kale oo mid ka mid ah uu yahay Al-shabaab ay ku dhaawacmeen, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay.
Labada qof kale ee dagaalkaasi ku dhaawacantay ayaa la sheegayaa inay ahaayeen askar ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland ee weerarka lagu qaaday, kuwaas oo haatan dhaawacooda la daaweynayo.
Illaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan ciidamada kaga dhintay weerarkaas iyo midka dhaawaca ah oo haatan gacanta ugu jira maamulka Jubbaland.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa waxaa caado u ah in xilliga lagu guddo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan inay sii labo jibaaraan dagaalada iyo qaraxyadda ay ka wadaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya, inkastoo sanadkaan ay qaraxyadda yaraadeen.